Control Remote Control Lithium Batrị Na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Igwe ọkụ dị ọkụ,Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri,N'èzí eji eji ọkụ ọkụ
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ngwa ngwa > Control Remote Control Lithium Batrị Na-ekpo ọkụ
Ime igwe na-achịkwa, insoles na-ekpo ọkụ. Ntọala okpomọkụ atọ: ala, ọkara na elu. Enwere ike iweghachi ihe karịrị ugboro 500. Achịkwa site na ntanetị igwe ikuku ka eji ọkụ ọkụ. Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ eletrik anaghị eji wires, eriri ma ọ bụ batrị ejiri ya. Nkwụnye ụgwọ na-anọ ruo awa anọ nke iji ya eme ihe mgbe niile (nhazi okpomọkụ). Kwadoro site na batrị batrị lithium, na-agbanye n'ime batrị. Njikwa ntaneti na-adaba n'ime akpa gị. Mmiri na-eguzogide ọgwụ ma nwee ike iji ya na ọnọdụ niile
Igwe ọkụ dị ọkụ Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri N'èzí eji eji ọkụ ọkụ Ihe ọkụkụ dị ọkụ Ntughari Igwe ọkụ dị ọkụ Ihe ọkụ ọkụ ọkụ Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ Egwú ọkụ ọkụ